दशैंमा केएनपीको ‘रंगमा दंग’ योजना
काठमाडौं (अस) । जापानको हेल्थी होम पेन्ट केएनपीले दशैंका अवसरमा ‘रंगमा दंग’ योजना नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकले केएनपी इम्प्रेशन र एक्सल टोटलको प्रत्येक रू. ६० हजारको खरीदमा एउटा कुपन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस योजनामा ग्राहकले लक्की ड...
हुन्डाइले ल्यायो ‘फेस्टिभ डिलाइट २०७६’
काठमाडौं (अस) । हुन्डाई अटोमोबाइल्सको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ग्राहकमाझ ‘हुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट २०७६’ योजना ल्याएको छ । उक्त योजना भदौ २ गतेदेखि कात्तिक १६ गतेसम्म लागू हुने कम्पनीले बताएको छ ।
योजना अन्तर्गत ग्राहकले नगद छूट र १ वर्ष निःशुल...
ओपो र बार्सिलोनाबीच साझेदारी नवीकरण
काठमाडौं (अस) । स्मार्टफोन ब्रान्ड ओप्पोले एफसी बार्सिलोनासँग आफ्नो तीन वर्षको पार्टनरशिप नवीकरण गरेको छ । यस अवसरमा कम्पनीले इडिसन एफसी बार्सिलोना रेनो १० एक्स जूम सिरिज पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
नवीकरणसँगै चिनियाँ कम्पनी र यूरो...
दाङमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन ३ अर्ब
घोराही । दाङको घोराहीमा प्रस्तावित प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा मात्र रू. ३ अर्ब लाग्ने भएको छ । थप पूर्वाधार निजी क्षेत्रको लगानीमा तयार गरिने दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालले बताए ।
नेपाल मेडिसिटी र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शबीच सम्झौता
काठमाडौं (अस) । नेपाल मेडिसिटी अस्पताल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शबीच चेम्बरका सदस्य एवम् कर्मचारीलाई उक्त अस्पतालमा दिइने छूटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । नेपाल मेडिसिटीका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका...
होस्टल एशोसिएशनको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी
काठमाडौं (अस) । देशभरका ७०० भन्दा बढी होस्टल सदस्य रहेको होस्टल एशोसिएशनमा भक्ति पाठकको टोली र गोविन्द गिरीको टोली नयाँ नेतृत्वका लागि प्रयासरत छन् । शनिवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ ७ गते हुने एशोसिएशनको सातौं वार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशनका लागि पाठकको टोलील...
ब्रिक्स लाइनिङपछि पुनःसञ्चालनमा आयो हेटौंडा सिमेन्ट, ८ दिन बन्द हुँदा ३ करोड ८४ लाख घाटा
भदौ २, हेटौंडा । भट्टीको फायर ब्रिक्स खसेपछि ८ दिनसम्म उद्योग बन्द हुँदा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले रू. ३ करोड ८४ लाखको घाटा बेहोरेको छ । उद्योग प्रशासनका अनुसार एकदिन उद्योग बन्द हुँदा रू. ४८ लाख घाटा हुने गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग मर्मतपछि पुनः सञ्च...
काठमाडौं (अस) । नेपाल उद्योग परिसंघले तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्व तयारीस्वरूप गण्डकी प्रदेशको पोखरामा साउन ३१ गते छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश उद्योग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम...
२ करोड ५० लाख लगानीमा ‘होटल हेभेन’
बारा । साढे २ करोडको लगानीमा बाराको निजगढमा ‘होटल हेभन’ सञ्चालनमा आएको छ । निजगढ–७ लिच्ची टोलस्थित उक्त होटेलको आइतवार एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन भयो ।
होटलको निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरेशकुमार खनाल र उपमेयर लिलाद...
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं (अस) । बीमा कम्पनी प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले आइतवार १७ औं वार्षिक साधारणसभा वीरगञ्ज, पर्सामा सम्पन्न गरेको छ । साधारणसभाले सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष श्रवणकुमार अग्रवालद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । कम्पनील...